विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि लाटो उतर भन्दै अर्थमन्त्रीलाई महाविर पुनले देखाई दिए नाफा -घाटा - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > अर्थ तथा ब्यापार > विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि लाटो उतर भन्दै अर्थमन्त्रीलाई महाविर पुनले देखाई दिए नाफा -घाटा
June 4, 2020 June 4, 2020 GRISHI157
धेरै बिजुली गाडीहरु आयात गर्दा कसरी घाटा हुन्छ र ? के गर्दा फाईदा हुन्छ? लाटो उत्तर
१.बिजुली गाडीको कर कम गर्दा धेरै गाडी आयात भएर मुद्रा बाहिर जाने डर भएकोले कर बढाएको भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नु भएछ । विदेशबाट बिजुली गाडी ल्याउँदा घाटा हुने भए सकेसम्म बिजुली गाडीहरु नेपालमै बनाउँ न त मन्त्रीज्यू । अहिलेलाई हवाईजाहज, रकेट र ठूला-ठुला चिज बनाउन नसके पनि बिजुलीले चल्ने र राम्रोसँग काम दिने बिजुली गाडीहरू नेपालमै बनाउन पक्कै सकिन्छ । सरकारको उचित नीति नियम सहित हुकुममात्र होस् त दुई-तीन वर्षभित्र त्यस्ता बिजुली गाडी बनाउने कम्पनहरू नेपालमा धेरै नै खुल्नेछन । सरकारले यो कुरा लेखेरै राखे हुन्छ ।
३. ल, एकछिनलाइ तपाईंले भने जस्तो मानौ कि कर कम गर्दा बिजुली गाडी धेरै आयात हुने भयो र विदेशमा नेपाली पैसा जाने भयो । तर, धेरै बिजुली गाडीहरु ल्यायो भने पनि त देशलाई अझै फाइदा हुन्छ नि अर्थ मन्त्रीज्यू ! किनभने गाडी चलाउनको लागि चाहिने पेट्रोल र डिजेलको आयात त ह्वात्तै घट्न जान्छ । यसरी पेट्रोल र डिजेल आयात गर्ने पैसा बच्ने भएपछि फाइदा भएन त हजुर ?